चल्दै नचल्ने भारतीय नोट पशुपतिमा चढाइन्छ !
ARCHIVE, NEWSPAPER » चल्दै नचल्ने भारतीय नोट पशुपतिमा चढाइन्छ !
पुण्य कमाउनका लागि कागजको खोस्टो मात्र ठहरिएका त्यस्ता नोट पशुपतिमा चढाउने क्रम बढ्दो छ । यसरी ठूलो परिमाणमा प्रतिबन्धित भारतीय रुपियाँ सङ्कलन हुन थालेपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई निकै समस्या परेको खबर आजको गोरखापत्रमा छ ।
-भारतबाट आएका केही बोलबम यात्रीबाट पनि यी नोट ल्याइएको अनुमान कोषको छ ।